IGAD oo shaqadii ka cayrisay Janaraal Gabre - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaIGAD oo shaqadii ka cayrisay Janaraal Gabre
June 25, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Janaraal Gabre. [Sawir Hore]
Jabuuti-(Puntland Mirror) Urur goboleedka IGAD ayaa shaqada ka ceyrshay kornayl Gabrezabher Alemsged oo Soomaalidu u taqaan “Janaraal Gabre”, sida lagu sheegay digreeto maanta oo Isniin ah kasoo baxday xoghayaha Guud ee IGAD Maxbuub Maalin.
Janaraal Gabre ayaa IGAD u ahaa taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah.
Digreetada ayaa lagu faray in Gabre uu wareejiyo hantida IGAD oo ay kamidyihiin qalabka xafiiska. Sidoo kale qaybta maamulka iyo maaliyadda IGAD ayaa laga codsaday in ay fududeeyaan xil ka wareejinta, iyo in ay shaqaale u xil saaraan sidii looga qaadi lahaa Janaraal Gabre dukumentiga lagu safro ee IGAD, haddiiba horey loo siiyey.
Gabre ayaa arrimaha Soomaaliya ku soo dhex jiray tan iyo sanadkii 2006-dii markaas oo uu hoggaaminayay ciidamadii Itoobiya oo taageero siinayay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee uu hoggaaminayay Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed.
Tan iyo intaas wixii ka dambeeyay Gabre ayaa si rasmi ah saameyn ugu dhex lahaa arrimaha Soomaaliya, waxaana uu xiriir dhow kala dhaxeeyay siyaasiyiiyinta Soomaalida.
November 26, 2017 Raysulwasaaraha Soomaaliya oo magacaabay wasiirka gaashaandhiga, xilkana ka qaaday wasiirka arrimaha diinta
June 4, 2018 Shirka amniga qaranka oo ka furmay magaalada Baydhabo
Erdogan oo marka kale loo doortay madaxweynaha Turkiga